Qixxeessaa Lammii irraa | Onkoloolessa 05, 2017 Jiruu fi jireenya dhala namaa keessatti bu’aa bahii heddutu jira. Kan akeeka, kaayyoo, obsaa fi cichoomina qabutu jireenya mataa isaa moohata. Kan waan jedhame kana guutatee hin argamne yeroo kamuu komataa, ajiifataa fi tuffataa ta’ee hafa. Waa uumee of hujoomsuu waan hin dandeenyeef hojii nama biraatti hin quufu. […]
WBOn WAL BARAA DANDEESSAN GARGAARAA! ============== Goota Gootaa Jajjabee, Waraana Bilisummaa Oromoo[WBO] ture. Maqaan dhaloota isaa Maammad Aammee, Kaaba Oromiyaa Walloo ti dhalate. Umurii isaa xiqqoo irraa kaase qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti dabarse. Dhaabataa fi qabatamaan waggaa digdamaa ol WBO keessatti dirqama isaa bahaa ture. Taakiyaa irraa kaasee Abbaa Muraasaa, … Hanga ajejaa cifiraatti hogganee […]